I-FAQs -iZhoushan Tanso Plastics yoomatshini i-Co, Ltd.
Ewe, sihlala sisebenzisa ukupakisha okuphezulu kumgangatho. Sikwasebenzisa ukupakisha ingozi enobungozi kwiimpahla eziyingozi kunye nokuhambisa okubandayo okukhuselekileyo kwezinto zokugcina ezinobushushu. Ukupakishwa kweengcali kunye neemfuno zokupakisha ezingekho mgangathweni zinokubangela intlawulo eyongezelelweyo.
Iindleko zokuhambisa zixhomekeke kwindlela oyikhethayo yokufumana iimpahla. Ukuthetha ngesiqhelo yeyona ndlela ikhawulezayo kodwa kunye neyona ndlela ibiza kakhulu. Ngokujonga elwandle sesona sisombululo silungileyo samaxabiso amakhulu. Amanqanaba eempahla ngqo esinokukunika zona ukuba siyazazi iinkcukacha zenani, ubunzima kunye nendlela. Nceda unxibelelane nathi ngolwazi oluthe kratya.